၅၀၀၀ တန် ဆင်းမ်ကဒ်ရောင်းချမည့် သတင်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ၅၀၀၀ တန် ဆင်းမ်ကဒ်ရောင်းချမည့် သတင်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ
၅၀၀၀ တန် ဆင်းမ်ကဒ်ရောင်းချမည့် သတင်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ
Posted by the best on Jan 15, 2012 in Copy/Paste | 32 comments
နေချင်းညချင်း ပြီး လိုက်ပြီ လား။
အဲလေ ယောင်လို့ လုပ်လက်စတွေ ဘယ့်နှယ်လုပ်ရမတုန်း….
ဂေါတမ ဗုဒ္ဓ ပြောခဲ့တယ်” သည်းခံ ” တဲ့ ။
အကျင့်ပျက် များနှင့် စီးပွားရေးလက်ဝါးကြီးအုပ် များ အခွင့်အရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့
၅၀၀၀ တန်းဆင်းကဒ် စီမံကိန်းကို လူထုလုပ်ရှားမှု့ မြစ်ဆုံကိစ္စ လိုလုပ်သင့်ပါတယ်… ဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးစနစ် ကောင်းမွန်လာအောင် အထောက်အပံတစ်ခုပါဘဲ… ကျွန်တော် facebook မှာ post တင်ထားတဲ့ သတင်းစာမှာပါတဲ့ ဆောင်းပါးအကြောင်းရေထားတာ ဖတ်ရပါတယ်… အဲ့ဒီထဲမှာ အစိုးရဝါဒဖြန့်တဲ့ မြန်မာ့အလင်းနဲ့ ကြေးမုံသတင်းစာ ဆောင်းပါမှာ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ဖုန်းကိုင်နိုင်မှု့ မျှော်လင့်ချက်ပါဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်.. ဆောင်းပါးအမည်က ကြိုးတန်းပေါ်က မင်းသမီးနှင့်မြည်းတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်… ရွာသားများသိခြင်လျှင်ရှာဖတ်ကြပါ…
proposal ကို သမ္မတကြီးမဖတ်ရသေးတာလား၊ ငွေများတရားနိုင်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးကို တရားရေးမဏ္ဍိုင်မှာ ကျင့်သုံးနေဆဲလို့ ပြခြင်တာလား။ ဥပဒေဆိုတာ အများကောင်းဖို့ ပြင်လို့မရဘူးလား၊ နည်းပညာဆိုတာ တစ်နာရီနဲ့တစ်နာရီတောင်တူတာမဟုတ် အရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်မှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ဆက်သွယ်ရေး က ကိုကိုတို့ရယ် ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား …………………လား၊ ……………………….လား။ ပြည်သူတွေတောင်းဆိုသင့်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးရလဒ်များစွာ ရှိတဲ့ Proposal တစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်။ ပထမ (၃၀၀၀၀၀)တန်ဖုန်းတွေအတွက် ကြိုတင်ရင်းနှီးထားတဲ့လူတွေအတွက် နစ်နာမှုတစ်ခုတည်းကြည့်လို့မရပါ။ ဒီ Proposal ကြောင့် စီးပွားရေးဈေးကွက်တည်ငြိမ်မှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်တယ်၊ နယ်တစ်နယ်နဲ့တစ်နယ်ကွဟမှု ဆက်သွယ်ရေးမကောင်းလို့ ၀ိသမလောဘ သမားတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းမြှင့်တင်မှုတွေခံနေရပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမယ်ဆိုရင် ၀ိသမလောဘသားတို့လောဘကိုအများကြီးကာကွယ်နိုင်မယ်။
၅၀၀၀ တန်ဖုန်းရနိုင်မရနိုင်ကို ရှင်းထားသေား ဒီပိုစ်ကို ဖတ်ကြည့်စေခြင်ပါသည်…
သမ္မတကြီးမအားသေးလို့ပါ။ အားရင်လက်မှတ်ထိုးပါလိမ့်မယ်။ ပြည်သူ့ဆန္ဒ္ဒ္ဒကို အမြဲအလေးထားဆောင်ရွက်နေသူပါ။ အချိန်ခဏပေးပြီးယုံကြည်စွာစောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။
ywarther lay says:
ဒီ ၅ထောင်တန် ကိစ္စက.. တိုင်းပြည်ရဲ့အခွန်ငွေတွေနဲ့..အနှစ်နှစ်တည် ဆောက်ထားတဲ့..အင်ဖရာစရပ်ချာကို.. ကြားကုမ်ပဏီတခုက.. မီဒီယာအားနဲ့..အစိုးရကို ဖိအားပေးပြီး.. ဈေးပေါပေါနဲ့.. အသုံးချရယူဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ မြင်မိတယ်..
ကျန်နေတဲ့.. ဖုန်းမသုံးနိုင်သူ လူထုကြီးနဲ့.. တခြားကုမ်ပဏီတွေအတွက်.. တရားမျှတတယ်လို့.. မထင်မိဘူး..
မတူတဲ့ အမြင်ပါပဲ သူကြီးရေ ..
ရွှေပြည်တံခွန်က သူတို့ဟာ သူတို့ ရပ်တည်ပါမယ်လို့တော့ ပြောထားပါတယ် ..။
ဒီတော့ တာဝါ … မြေနေရာ … ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု အားလုံးကို ရွှေပြည်တံခွန်တစ်ခုထဲက အကုန်အကျ ခံပြီး ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ခွင့်ပြုသင့်တယ် ထင်ပါတယ် …။
အပြိုင်အဆိုင်ရှိမှ တိုးတက်မှာကိုး သူကြီးရဲ့ …
တာဝါ … မြေနေရာ … ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု အားလုံးကို ရွှေပြည်တံခွန်တစ်ခုထဲက လုပ်နိုင်မယ်မထင်မိဘူး..။
အတင်းလုပ်လည်း.. ဖုန်းဆက်နိုင်တဲ့.. နယ်ပယ်နမိတ်သေးသေးလေးဖြစ်ပြီး..မဖြစ်နိုင်တဲ့.. လိုင်းတွေချပေးတာမို့.. လိုင်းတွေအကုန်ကြပ်ပြီး သုံးမရဖြစ်ကြမှာပဲဖြစ်မှာပါ…။
တကယ်တန်း.. ပြည်သူပိုင်နက်ဝပ်မသုံးပဲ.. ကိုယ်ပိုင်ထလုပ်ရင်… ဒေါ်လာနဲ့တောင် ဘီလီယံချီကျမယ်ထင်မိတယ်..။
ဒေါ်လာ ၁သန်းဟာ.. မြန်မာငွေ သိန်း၈ထောင်ထားပါစို့..။ ဒေါ်လာသန်း၁၀၀၀ဆို.. သိန်းဘယ်လောက်လည်းတောင် မတွက်တတ်တော့ဘူး..။
ဒီလောက်များတဲ့..ငွေတွေ..ရင်းနှီးမြုတ်နှံပြီး.. ဘယ်တော့..ဘယ်မှာ.. ဘယ်လောက်ပြန်ရမယ်ထင်ပါသလည်း…။
ဆိုတော့…. ဒီလိုအင်ဖရာတွေထလုပ်မယ်ဆိုရင်တောင်… အခုလောလောဆယ်ရှိပြီးဖြစ်နေတဲ့.. ဆက်သွယ်ရေးက ကြိုးလိုင်းတွေ.. အိပ်ချိန်းတွေ.. စက်တွေ.. နိုင်ငံခြားနဲ့ချုပ်ထား..အပေးအယူလုပ်ထားတဲ့.. ကန်ထရိုက်တွေ.. လိုင်စင်တွေကိုလည်း ယူသုံးရမှာပါပဲ..။
မြန်မာပြည်မှာ ဆဲလ်ဖုန်းတွေ ..အင်တာနက်ကြေးတွေ.. အစပိုင်းက ဘာကြောင့်အရမ်းဈေးကြီးသလည်းဆိုတော့… အဲဒီအင်ဖရာစရပ်ချာဆောက်လုပ်ခတွေ.. ထည့်ပေါင်းထားရလို့ပါ..။
ကုမ်ပဏီတွေဟာ.. ရင်းနှိးမြုတ်နှံမှုအတွက် အမြတ်ဘယ်လောက်ကျန်မလည်း.. ပြန်ရမလည်း.. ဘယ်နှစ်အပိုင်းအခြားမှာ..ဘယ်လောက်ပြန်ရမလည်း ကြည့်ရပါတယ်..။
အရှုံးခံပြီးလုပ်မယ်ဆိုတာ.. အရင်းရှင်စံနစ်မှာ အဓိပါယ်မရှိပါဘူး..။ အရှုံးခံမယ်ဆိုတာ. လိမ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်..။
မြန်မာပြည်လို နုသေးတဲ့ အစိုးရမျိုးဟာ.. တိုင်းပြည်ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးအင်ဖရာကို.. ဘယ်သူ့လက်ထဲမှ ထိုးအပ်ခွင့်မရှိဘူး..။ မပေးသင့်ဘူး..။
တကယ်လို့ ..အဲဒါတွေပေးသုံးမယ်… လူထုပိုင်တွေတဖက်လှည့်နဲ့..သုံးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်.. ပြောကြေးဆိုရင်..ကျုပ်လည်း. ကျပ် ၄၉၀၀နဲ့.. ကဒ်တွေထုတ်ရောင်းနိုင်ပါရဲ့..။
ကဒ် ၁သန်းလည်းရောင်းပြီးရော.. ဆာယိုနာရ…။
ဆက်သွယ်ရေးကပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင်ရော။ သူတို့နက်ဝပ်ဖြတ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ရော။ ဖြစ်နိုင်မလားသူကြီး။
ကဒ်သန်3း0နဲ့ တွက်ရင်တစ်ကဒ်ကို34ဒေါ်လာဖိုး ဖုံးအသုံးပြုပြီးရင်
1ဒေါ်လာ=800ကျပ်နဲ့ တွက်ရင် 34ဒေါ်လာx800=27200ကျပ်
10000တန် PREPAID ကဒ်(3)ကဒ်လို့ ဘဲထားပါတော့
ခု10000တန် GSM PREPAID ကဒ်ရဲ့သက်တမ်းက 4လသတ်မှတ်ထားပါတယ်။
လုပ်ငန်းကိုသူကြီးတကယ်ဘဲ“ကျပ် ၄၉၀၀နဲ့.. ကဒ်တွေထုတ်ရောင်းနိုင်ပါရဲ့..။
ကဒ် ၁သန်းလည်းရောင်းပြီးရော.. ဆာယိုနာရ”လုပ်မှာလား။
ဒေါ်လာ ၁ဘီလီယန်ကို..ဥရောပသွားပြီး မြုတ်နှံလိုက်ရင်.. . ပထမလတင် အမြတ်သန်းချီနေလောက်ပါတယ်..။
ဒီလုပ်ငန်းကို.. ကိန်းဂဏန်းနဲ့.. ဖြစ်နိုင်ချေသိပ်မတွေ့ရဘူး..။ နောက်ကွယ်မှာ.. တခုခုတော့…. တခုခုရှိတယ်..။
အင်း ဝေးသေးဗျ ဝေးသေးပါဘဲ။
ဝန်ကြီးဌာန တွေဟာ နိုင်ငံတော် အတွက်လောဘတကြီး ငွေရှာပေးရမဲ့ နေရာတွေ မဟုတ်ပါ။
ပြည်သူလူထု အတွက် အဆင်ပြေအောင် ညှိနှိင်းဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ ဌာနသာဖြစ်သင့်တယ်။
ဝန်ကြီးဌာန သုံးဘို့ငွေ ဘတ်ဂျက်ကို နိုင်ငံတော်က သတ်မှတ်ချထားပေးပါတယ်။
ဟိုတခါဖတ်ဖူးလိုက်တယ် ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးက နိုင်ငံတော်အတွက် ငွေရှာပေးခဲ့တယ်ဆိုလားဘဲ။
အခုတော့ဝန်ကြီးဌာနတွေဟာ ရှိသမျှရောင်းစား ရသမျှ လိုက်တောင်း လူထုကို မညှာမတာ လယ်ပင်းညှစ်ပီး ချစ်တီးသေလို့ဝင်စားတာလား ဖက်ဆစ်တွေ သေလို့ ဝင်စားလာတဲ့ဟာတွေလား ပြောရလောက်အောင် လက်သံ တယ်ပြောင်ကြပါလား..
စားပေါက်မရှိလို့ကတော့ သူတို့ ဘာမှမသိ…ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူး…တကယ်…တကယ်။
http://doctorsatephwar.blogspot.com/2012/01/blog-post_14.html ကိုဝင်ဖက်ပြီးတွေ့ ခဲ့
“အဓိကသော့ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် ။
ဥပမာဆိုကြပါစို့ ယခုရင်းနှီးမြှုတ်နှံမည်ဟု နာမည်ကြီးနေသော ရွှေပြည်တံခွန်ကုမ္ပဏီသည် မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း စီမံကိန်းအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံကာ တယ်လီဖုန်း အလုံး ၂ သန်းကို မြန်မာပြည်သူတွေကို မရောင်းပဲအလကားပေးလိုက်သည် ဆိုကြပါစို့ ထိုဖုန်းအလုံး ၂ သန်းကိုရသွားကြကုန်သော မြန်မာတို့သည် တစ်သက်လုံး ချုပ်တီးထားသမျှ အတိုးနှင့်ပြောကြပေတော့မည် ။တစ်နေ့ကို ပျမ်းမျှ ဖုန်းတစ်လုံးသည် ၀.၅ ဒေါ်လာနှင့်ညီမျှသည့် မြန်မာငွေတန်ဘိုးပဲ ပြောသည်ဆိုကြပါစို့ ၊ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီသည် တစ်နေ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁သန်း နှင့်ညီမျှသည့်ကျပ်ငွေများဝင်ငွေရှိလေသည် ။တစ်လ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀နှင့် ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေများဝင်ငွေရှိလေသည် ။ တစ်နှစ်ဆိုလျှင် ဒေါ်လာ သန်း ၃၆၀ နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေများ ၀င်လာလေတော့သည် ။ ၃ နှစ်ဆိုလျှင် သူတို့အရင်းကျေလေပြီ….။ ထိုမြန်မာကျပ်ငွေနှင့်ဝင်လာသော ဖုန်းပြောခများကို သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများက အစိုးရထံသွင်းပြီး အစိုးရထံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ပြန်လိုချင်ကြလေသည် ။ဒီမှာတင် အစိုးရက စဉ်းစားရလေပြီ ။မစဉ်းစား၍မရတော့ ၊ ပြည်သူတွေများများပြောလေ အစိုးရက ဒေါ်လာများများ ရှာရလေဖြစ်လာတော့မည် ။ ဒီနေရာမှာ အဆင်မပြေဖြစ်ကြလေသည် ။
Voice Of Myanmar”
ရွှေပြည်တံခွန်ရဲ့ Proposal မိတ္တူလေးဖတ်လို့ရရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ………..
၅၀၀၀ တန်းဆင်းကဒ် တွေဟာ ချစ်တီး ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန က ၀န်ထမ်းတွေ ရေရှည်အကျိုးရှိမဲ့စီးပွားရေးစီမံကိန်း မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူး ။ ရှင်းနေပါပီလေ။
သမ္မတကြီးက ပြည်သူ့ဆန္ဒ္ဒ္ဒကို အမြဲအလေးထားဆောင်ရွက်နေသူပါ။ ၅၀၀၀ တန်ဖုန်းရနိုင်ပါသည်…
ဥပဒေအရ.. .. တခါလာလည်းဥပဒေ အရ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြီးဘဲ
ဥပဒေမှာ ဖုန်းတစ်လုံးကို ၁၅ သိန်း၊ ၅သိန်း နဲ့ရောင်းရမယ်လို့ပါလား။
ဗိုလ်ချုပ်ရူးကြီးရဲ့အမွေဆိုးတွေကို ထားခဲ့ကြပါတော့….စဉ်းစားမိရင် နာကျင်လွန်းလို့ပါ။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက ပြည်သူအားလုံးခဗျား သူတို့ ၃သိန်းဖုန်းမရောင်းရမှာစိုး လိုက်ပြောနေတာပါ။
လုံးဝမ၀ယ်ကြပါနဲ။ ခဏစောင့်နေကြပါ။ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်…………
ဒီမှာကျတော့ တစ်မျိုးဖြစ်ပြန်ပြီ ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်း ……………
၃ သိန်း နဲ့ ၅၀၀၀ ပူးပေါင်းလိုက်ရင် အစဉ်ပြေသွားမှာပါ…..ဟုတ်တယ်ဟုတ်…။
တော်တော်ကောင်းတဲ့ပို့စ်ဘဲ ကောင်းလွန်းလို့ တစ်လုံးမကျန် ကူးရေးလိုက်ပါတယ်
( နေချင်းညချင်း ပြီး လိုက်ပြီ လား။ အလွန်ပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ )